I-Paz Cottage entle eJuliasdale - I-Airbnb
I-Paz Cottage entle eJuliasdale
Juliasdale, Manicaland, Zimbabwe
UAndrew ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uAndrew iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iimbono ezimangalisayo zeentaba kwiikhilomitha ezantsi kweCumberland Valley. Le ndlu yakhiwe kwithafa lemithi yaseMsasa engonakaliyo kwindawo yaseJuliasdale eNyanga, eZimbabwe. Kukho ukuhamba ukuya kumachibi omlambo apho unokuqubha khona. Imalunga neekhilomitha ezingama-40 ukuya kwidolophu yaseNyanga. Kufuneka ukwanelise ekutyeni - oku kukuziphekela. Luluvo oluhle ukuthatha iphepha langasese xa kunokwenzeka ukuba unikezelo olungxamisekileyo luphelelwe lixesha!
Imbono ezantsi intlambo ikhetheke kakhulu. Ngokunjalo neentaka. Kwaye kukho amachibi emlanjeni onokuthi uwafumane, uphonononge kwaye uqubhe...ingqondo epholileyo! I-cottage iyakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezi-8 - kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokulala eliphezulu elineebhedi ezi-4 ezingatshatanga. Izitepsi eziya kwigumbi eliphezulu zimnqantsa kakhulu! Ineembono ezintle kwaye imiselwe njengendawo epholileyo enomoya 'yokulala'.
Akukho bamelwane ngaphandle kweentaka. Ungathi krwaqu iduiker ezuba enqabileyo.
Umlondolozi uhlala kwikona yeehektare ezili-15. Uya kukunceda ukubasa umlilo wakho rhoqo ngorhatya ukuba uyafuna, kungenjalo uya kuba ekufutshane nawe ukuze akuncede.
Asihlali kwipropathi ngoko ke unendawo yakho kunye nemfihlo. Kukho umgcini-u-Shacky. uya kukubulisa aze akunike izitshixo, akuphembelele umlilo ngorhatya ngalunye kwaye alayite umlilo we-brai ngaphandle komnyango wasekhitshini. Uya kunceda kwakhona ukumisa i-brai yasehlathini ukuba ufuna ukutya kude nendlu ezantsi kwindlela eya emlanjeni.
Asihlali kwipropathi ngoko ke unendawo yakho kunye nemfihlo. Kukho umgcini-u-Shacky. uya kukubulisa aze akunike izitshixo, akuphembelele umlilo ngorhatya ngalunye kwaye alayite uml…